Kanjani lokho ukugqoka kuyawulimaza umoya wethu - Izindaba Rule
Kanjani lokho ukugqoka kuyawulimaza umoya wethu
Lesi sihloko osesikhundleni “Kanjani lokho ukugqoka kuyawulimaza umoya wethu” lalotshwa Daniel Glaser, The Observer ngeSonto 13 December 2015 09.30 UTC
Ukugqoka up for amaqembu Christmas kungakwenza uzizwe sexier, izethembe ngokwengeziwe lapho noma kakhulu nje ukuzinyeza. izihibe Social and sartorial yavama, kodwa lokho kungenzeka awuqapheli ukuthi owukhethayo ngubo kungashintsha indlela ubuchopho uyasiqonda umzimba.
Related: Ivula izimfihlo ebuntwaneni
The American isazi sokusebenza kwengqondo uWilliam uJakobe wabhala 1890 ngowesifazane wabona egqoke isigqoko nge feather abade kuso ngubani ngokuzenzakalelako izama lapho engena ekamelweni, sengathi feather beniyingxenye komzimba wakhe. Modern yezinzwa nemaresiphi ziye ezobhekwa lokhu: uma monkey egcina ithuluzi, ukuthi kuye kwaboniswa ukuthi ubuchopho kuyonke ithuluzi kangangokuba cishe ingxenye yomzimba wabo. Lokhu kuvumela monkey ukusebenzisa ithuluzi dextrously, sengathi i finger extra-long.
Ithonya Kungashiwo okufanayo wazizwa izingubo Flamboyant, noma Wand magic of a imvunulo inganekwane - salokhu kwandiswa umzimba wethu zingase zisenze ukunyakaza senze ngendlela ehlukile. Lokhu kungase kube ukuthi kungani sikwazi ukushayela, njengoba wonke imoto iba emaphethelweni umzimba wethu - kodwa kungcono ukuba ungazami ukuthi emva party.
Dr Daniel Glaser kuyinto umqondisi we Isayensi Gallery at WeNkosi College London
← Indlela abantu liyowanqoba Mars kanye nangale Amazon ukudansela isiginci sakhe hoverboards phezu ukwesaba nokuphepha →